दैलेख कर्णालीमै पहिलो जिल्ला डुङ्गेश्वर र नारायणमा १०–१० उजुरी::Nepal's Digital Magazine
दैलेख कर्णालीमै पहिलो जिल्ला डुङ्गेश्वर र नारायणमा १०–१० उजुरी
भाद्र २२, दैलेख
कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा गत आवमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । ७९ वटा स्थानीय सरकार र १० वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५ उजुरी दैलेखमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८५ उजुरी मध्ये ५० फछ्र्याैट भएको र ३५ उजुरीमाथि अनुसन्धान भैरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । धेरै उजुरीहरु रिसको भरमा पर्ने भएकोले संख्याको आधारमा दैलेख पहिलो भएपनि फछ्र्याैट आधारमा भने कम स्थानमा परेको छ ।
दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय तहमा पनि उजुरीको संख्या बढेको छ । दैलेखका ११ तहमध्ये सवैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा १० र नारायण नगरपालिकामा १० उजुरी परेका छन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा परेका १० उजुरी मध्ये ८ उजुरी फछ्र्याैट भएका छन् । २ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भैरहेको छ । नारायण नगरपालिकामा परेका १० उजुरी मध्ये ४ वटा फछ्र्याैट भएका छन् भने ६ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । त्यस्तै आठविस नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका र नौमूले गाउँपालिकामा ९ । ९ वटा उजुरी गत वर्ष दर्ता भएका छन् । आठविसमा ९ मध्ये ६ वटा फछ्र्याैट भई ३ वटाको अनुसन्धान चलेको छ । दुल्लूमा ९ मध्ये ८ वटा फछ्र्याैट भई १ मुद्दा अनुसन्धानमा छ । नौमूलेमा ९ मध्ये ६ फछ्र्याैट भई ३ वटा अनुसन्धान भैरहेको छ । भैरवी गाउँपालिका ८ मुद्दा मध्ये ६ फछ्र्याैट भई २ वटा अनुसन्धानमा छन् । महावु गाउँपालिकामा परेका ८ मुद्दा मध्ये ३ फछ्र्याैट भई ५ वटा अनुसन्धानमा रहेका छन् । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा परेका ७ मुद्दा मध्ये ४ वटा फछ्र्याैट भएका छन ३ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । गुराँस गाउँपालिकामा परेका ७ उजुरी मध्ये २ वटाको फछ्र्याैट भएको छ भने ५ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकामा परेका ६ वटा उजुरी मध्ये २ वटा फछ्र्याैट भएका छन् भने ४ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा कम मुद्दा पर्ने पालिकाको रुपमा ठाँटिकाँध गाउँपालिका रहेको छ । २ वटा मुद्दा परेका मध्ये १ फछ्र्याैट भएको र एउटाको अनुसन्धान भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेगनाथ सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लामा उजुरीको संख्या वर्षेनी बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बिरुद्धको नागरिक निगरानी केन्द्र स्थापना गरि बिभिन्न जनचेतनामुलुक गतिबिधिहरु जिल्लामा संचालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले सूचना लुकाउने, उपभोक्ता समितिमा आफन्तहरुलाई काम दिने उद्देश्य राख्ने र उपभोत्ता समितिले ठेक्का बचेर कम गुणस्तरका कामहरु हुने प्रचलन बढेसँगै उजुरीको संख्या बढ्दै गएको नागरिक निगरानी केन्द्रका अध्यक्ष दीर्घ अधिकारीले बताए । सुशासन र पारदर्शीतालाई ध्यान दिदै हरेक विकासमा नागरिकहरुको सक्रिय सहभागिता बिकास गर्न सक्ने प्रभावकारी काम हुने र गुनासोहरु पनि कम हुने अधिकारीको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आफै जिम्मेवार नहुनु सबैभन्दा ठूलो रोग भएको सुशासन अभियानकर्ता दुर्लभ बोगटीको भनाई छ । अहिले देखिने उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक फरक छन् तर भित्रि रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफै डोजर मालिक हुने, आफैले उपभोक्ता समिति गाईड गर्ने चलन बढेको छ । सुशासन र जवाफदेहिताका औजारहरुको पालना कसैले गर्न सकेका छैनन् । सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुनै समस्या भएको बोगटीको टिप्पणी छ ।
कर्णाली प्रदेशभरी यो वर्ष ४३६ वटा उजुरी परेका मध्ये २ सय ६१ उजुरी फछ्र्याैट भएका छन् भने १ सय ७५ उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगले छानवीन गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिको ठेक्का बेच्ने परिपाटी ठूलो रोग
दैलेख जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन भएका कामहरु मध्ये करिव ८० प्रतिशत कामहरु गोप्य रुपमा बिक्रि गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी बिक्रि गरिएका कामहरुमा अवस्यपनि गुणस्तर पुरा हुँदैन्, ठेक्का बेचेर सिमित उपभोक्ता समितिहरुले बाँडफाँड गर्ने परिपाटी जवसम्म अन्त्य हुँदैन तवसम्म उजुरीको संख्या पनि घट्दैन र कामहरु दिगो र गुणस्तयुक्त हुँदैनन् । अर्कोतर्फ जिल्ला भित्र ठूला निर्माण कम्पनीमार्फत गरिने अधिकाँस कामहरुको सामाजिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कामहरु पनि जिल्लामा देखिएका छैनन् सुशासन अधियानकर्ता दुर्लभ बोगटीको टिप्पणी छ ।
बिकास जुनसुकै स्थानबाट आएको होस्, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्र, चाहे अन्य दातृ निकाय सवै रकम स्थानीय जनताको रकम हो भन्ने कुरा बुझेर सवै कामहरुमा चासो बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यो काम स्थानीय जनताहरुले पनि सक्रियताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भगवतीमाई गाउँपालिकामा २० पशुचौपाए मरे चट्याँङ लागेर आमा छोरा बेहोस
दैलेख काँग्रेसको जागरण अभियान सुरु नेता कार्यकर्ताहरु गाउँ गाउँमा
बेरुजु फछ्र्योट बारे जिल्लास्तरमा बहस
हेलिकप्टर कुर्ने समयभित्र कर्णाली अस्पताल पुग्छन् बिरामी दैलेखका दुर्गममा हेलिकप्टरको पहुँचै छैन्
संविधान दिवस दैलेखमा भब्य मनाउने तयारी
दशंै अघि बिभिन्न पालिकाबाट १८ हजार क्यून्टल चामल माग
भाद्र २८, दैलेख तीन दिनदेखि लगातार आएको पानी सँगैको चट्याँङले दैलेखको भगवतिमाई...
भदौ २७, दैलेख प्रमुख प्र्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको दोस्रो चरणको...
भदौ २७, दैलेख दैलेखका स्थानीय सरकारहरुमा देखिएको बेरुजु समस्याको दिगो समाधानका बारेमा...
भाद्र २५, दैलेख जिल्ला अस्पताल दैलेखले पाएको स्वीकृती १५ शैयाको हो तर...
भाद्र २५, दैलेख दैलेखमा असोज २ देखि ४ गतेसम्म संविधान दिवस भब्य...
भाद्र २३, दैलेख खाद्यन्नको समस्या झेल्दै गाउँमा निकै महंगोमा पसलको चामल किन्नुपर्ने...
डोल्पाका लागि उडेको हेलिकप्टर दैलेखमा आकस्मिक अवतरण
भाद्र २३, दैलेख सुर्खेतबाट डोल्पाका लागि उडेको माउन्टेन एयरको नाइनएन (ए.एलडी) हेलिकप्टर...
पीँडा र बेदनाको खाडलमा ‘लोकतान्त्रिक चौक’
धन बहादुर के.सी. ‘लोकतान्त्रिक जन–आन्दोलन २०६२÷ ०६३ सफलता पश्चात आन्दोलनरत तत्कालिन नेकपा...
भाद्र २२, दैलेख कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा गत आवमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका...
संरचना परिवर्तन सँगै काम गर्ने तरिका पनि बदल्नुपर्छ ः थापा
भाद्र २२, दैलेख जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले संघीयता कार्यान्वयन...
सक्षम प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित धमाका राष्ट्रिय दैनिकका लागि :
प्रकाशक/सम्पादक: विष्णु प्रसाद शर्मा
मो. ९८५१११३३१३, ९८४८१४१३१३
हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ र मधुसुधन गिरी,
कार्यकारी सम्पादक: कमल शर्मा
डेस्क सम्पादक :उदय अधिकारी,पूजा भण्डारी,डि.बि.थापा मगर
© 2019 Dhamaka Daily All right reserved Site By : SobizTrend Technology